3 na ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ndị na-ere ahịa | ABC
HT7A-2N bụ 3 na 1 kọnvatịbụl aluminum aka ụgbọala. Mkpokọta nke 90 Celsius (H × W × D) bụ 39 ”× 20-1 / 2” × 54 ”, Mkpokọta nke 45 ° (H × W × D) bụ 38” × 20-1 / 2 ”× 60 ”， Apịaji size (H × W × D) bụ 52” × 20-1 / 2 ”× 18“, na mkpịsị ụkwụ efere size (W × D) bụ 18 ”× 7-1 / 2”, ya ibu ikike bụ 600lbs., ụgbụ ahụ bụ 34lbs.nke dị oke ọkụ karịa nke 2 na 1 nke a na-agbanwe agbanwe nke ala aluminom, dị ka HT7A, HT7B. Thegbọ ala aluminom na-eji nwayọọ nwayọọ na-agbada site na ọnọdụ ụgbọ ala aka na ọnọdụ ụgbọ ala bara uru ma ọ bụ na-agbanye aka na aka aka.
Ka na-echegbu onwe gị banyere enweghi trolleys kwesịrị iburu ibu buru ibu? Mgbatị mgbatị agbatị nke HT7A-2N ga-enyere gị aka idozi nsogbu a n'ụzọ zuru oke. Ka na-atụle ma ị kwesiri ịhọrọ igwe eji arụ ọrụ abụọ iji dozie nsogbu nke ibu ngwongwo n'oge dị iche iche? Ọ dịghị mkpa iche. Họrọ HT7A-2N, onye njikwa aka ya pụrụ iche ga - enyere gị aka idozi nsogbu a.
1. Ọ nwere ihe abụọ 5 ”eyi ihe eluigwe na ala ihe nkedo.
2. 10 ”taya pneumatic na-enye ire ụtọ.
3. Enwere ike idozi aka ahụ dị ka kwụ ọtọ ma ọ bụ vetikal iji gboo mkpa nke oge dị iche iche.
4. Longer mpịachi tube maka ibu ibu.
5. Ngwunye aluminum dị ọkụ ma nwee arụmọrụ ka mma.
6. Uzo ato na ugbo ala: ugboala aka, ugbo ala, Tilt Truck.
Uru nke trolley a dị oke elu, ị nwere ike iji ya ebe ọ bụla, ịnwekwara ike iburu ya na akpati ahụ, mputa nke ọla mara mma na-enye ya anya ederede, echiche imepụta nke mgbanwe nke ụdị iji mee ka trolley nkịtị nwee ọrụ nke ụgbọ ala ndị ọzọ.
Ngwongwo di elu nke nwere ike igbanwe uzo ato. Chọghị nke ọ bụla?
Nke gara aga: Sunnydaze Rolling Ogige Ugbo ala nke nwere ike ijikwa oche ụgbọ ala, oche swivel, nkata na tray.
Osote: China emeputa oké ọrụ ígwè 2 wiil P- aka n'aka trolley gwongworo
3 n'ime 1 ụgbọala a na-agbanwe agbanwe
700 lb Aka ụgbọala
Aluminom Aka ụgbọala
Trolly Aka Trolly
Tgbọala Aka Gị na Wheel 2
Trolley Aka Tọbụl
Solid wiil steepụ ịrị aka Trolley
Trọks Aka Aka
800 lbs. 2 na 1 ígwè cnvertible n'aka ụgbọala del ...
Obere Nchekwa Obere Ime ụlọ ime ụlọ Shelf maka ulo Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa Ogbe shelf Mpempe akwụkwọ nchekwa edo edo